Aza omena an'ireny basy kilalao ireny akory ny zaza
2014-11-27 @ 10:23 in Vaovao, Tsy aritra
Maro tamintsika angamba no nahita an'ilay video izay nahafaty an'i Tamir Rice, zazalahy mainty fihodirana, vao 12 taona monja, notifirin'ny polisy tany Etazonia. Nisangisangy izy, ka rehefa misy mpandalo dia tondroiny amin'ny basy kilalao avy ato aoriana. Tsy hitan'ilay mpandalo izany fihetsika izany ka tsy mitranga eo ny olana. Fa nisy kosa vavolombelona nahita avy lavitra dia niantso polisy. Fantatr'ilay niantso hoe mety basy kilalao ilay basy ka nolazainy tamin'izy niantso. Nandefa polisy teo an-toerana ny antso vonjy taitra saingy tsy voalazany ilay resaka hoe basy kilalao. Nony tonga ny polisy nahita an'i Tamir Rice nitazona ilay basy tao am-paosiny ka saika hamoaka tanana, dia tonga dia notifirin'izy ireo. Maty teo no ho eo. Araka ny vaovao dia tsy mbola nanana traikefa ilay polisy satria tsy mbola ampy herin-taona nanaovana ny asany akory.
Amin'ny toe-javatra tahaka itony ankoatra ny fanadihadiana izay tokony hatao amin'ilay mpitifitra sns, dia manana ny andraikiny lehibe ny ray aman-dreny sy ny fiaraha-monina. Mbola tsy azoko foana hatramin'izao hoe nahoana no ividianana kilalao izay maka tahaka ireo fiadiana fanaovana herisetra ny ankizy. Basy, antsy, sns. Ny hitany amin'ny fahitalavitra aza efa tsy fidiny. Taloha ny tena dia nanao "bandy sy rola", "polisy volera", izay marina fa mifanalavitra be amin'ny tena izy (réalités) saingy na ireny aza dia efa miteraka faniriana hanao herisetra ao anaty lalina ao. Ka raha tsy voataiza tsara dia lasa mivoaka rehefa lehibe.
Ankatoky ny noely izao, fetim-pifaliana. Dia aleo mba kilalao miteraka fifaliana ho azy, ho an'ny manodidina azy, ho an'ny feon'ny fieritreretany, no omena ny zaza. Izao fotoana izao indrindra no tokony hikolokoloina ny ho avy izay irina ho azy.